Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii Qawmiyadaha oo Ururka Haweenka S.Ogadenya lagu martiqaaday
Kulankii Qawmiyadaha oo Ururka Haweenka S.Ogadenya lagu martiqaaday
Waxaa maanta oo bisha tahay 6 April 2013 Jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria ka qeyb galeen kulan dumarka qow-miyaadka kala duwan ee ku nool magaalada Melbourne ay iskugu yimaadeen. Kulankan oo laqabto bilkasta mar ayaa lagu casumay jaaliyada S.Ogadenya ee Victoria, ururka OYSU, iyo Ururka Haweenka S.Ogadenya.
Waxaa shirka ka qeygalay gudoomiyaha ururka OYSU Melbourne marwa Lul abdi iyo xubno ka mid ah Ururka Haweenka S.Ogadenia iyo jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria.
Kulankan ayaa waxaa lagu furay in dumarka ka soo jeeda qowmiyadka la gumeysto ama cadaadiska lagu hayo ey isku weydaarsadaan fikiro ku aadan inay kaga wada tashadaan siyaabihii cadaadiska lagu hayo dumarka looga qaadi lahaa isla marahaantaa horumar loo gaadhsiin lahaa dumarka ku nool wadamada uu ka jiro cadaadiska.
Marwa Lul ayaa waxey soo jeedisay warbixin ay ku biyaamisay wax qabadka Jaaliyada Ogadenia ee Victoria, ururka OYSU Melbourne iyo ururka Hawenka Ogadenia ee Victoria. Waxey kaloo ka hadashay dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida Ogadenia. Waxey fahfaahen dheer ka bixisay Marwa Lul Jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria iyo bulshooyinka kala duwan ee ae jaaliyadda ay ka kobantahay waxqabad kooda iyo sidey isula shaqeeyaan.
Dumarka ka soo qaybgalay shirka ayaa bogaadiyay waxqabadka jaaliyad S.Ogadenya iyo ururada bulshada hoos yimaada. Ka qeybgalka kulankan ee Jaaliyadda S.Ogadenya ayaa runtii ahaa mid aad u qiimo badan soona jiitay dumarka ajnabiga oo aad uga xumaaday dhibaatooyinka lagu hayo S/Ogadenia iyadoo dumarka qaar ay ay aad oga ilmeeyeen filimadii ay daawaden. Kulankaan qeybtiisa sadaxaad ayaa wuxuu dhici doona bisha shanaad.
Hani Macalim /Melbourne